Maxay tahay Sababtu? | allsanaag
Tumaalka iyo Faqashka Tukeba Xabsiga ayaan dhigi doonaa
Labaatan iyo dhowr sano ka hor ayaa qurba joogta beesha Isaaq waxay go’aansadeen in geesigii hore ee Soomaaliyeed Allah ha u naxaristee Maxamed Cali Samatar, oo ay qurba joogta beesha Isaaq intooda badan ugu yeedhi jireen Tumaalka, iyaga oo ku cunsuriyeenaya qabiilka uu ka soo jeeday iyo Yusuf Abdi Ali Tuke , “Faqashka” oo ka soo jeeda Beesha Dhulbahante inay xabsiga ku dhigi doonaan qaaraan ay dhexdooda Iska ururiyaan. Arintan waxay ka bilaabantay dalka Canada iyada oo la adeegsaday weriye la xididay Hargaysa.
Talafishanka ugu weyn dalka Canada ee CIBC, Barnaamijkiisa 5th State ayaa laga sii daayey muddo hadda laga joogo dhowr iyo labaatan sano in Tuke fara xumayn iyo dil u gaystay beesha Isaaq. Tuke, waa ka cararay Canada oo Maraykan ayuu galay.
Labaatan sano ka dib markii uu Tuke ka cararay Canada, oo qurba joogta beesha Daarood Wasiiro, Xildhibaano ku yeelatay wadamaddii ay u soo qaxeen ee Maraykan iyo Canada , weli beeshii Isaaq iyagu Tuke ayeey shaqo ka dhigteen oo qaaraankii Tuke lagu xiri lahaa ayeey iska dhex ururinayaan
← Puntland Weey ka Qeeb Galeeysaa Wadahadlka Farmaajo oo Fuursade u magacaabay Agaasimaha Guud ee Villa Wardhiigley →